TRUESTORY: ဘီဘီစီ မြန်မာပိုင်းမှ သတင်းထောက်တစ်ဦး အောက်လွှတ်တော်ဥက္ကဌ အတွက် ပြည်သူများအား စည်းရုံးပေးရန် အမေရိကန်ဒေါ်လာ တစ်သောင်း လက်ခံရရှိ
“It is an agreement I heard that one reporter from BBC Burmese got 10,000,000 myanmar kyats to promote U Shwe Mann before the election campaign by using BBC Burmese Online and radio service. Some reporters including me heard that news in the last week. The amount of money is too much for us. He got that money from the son of the Speaker and reached agreement to use BBC asatool for the campaign. But I can not confirm whether it is right or wrong but you can see the upcoming news coverage from BBC Burmese Service. If it is true, journalists community should take necessary action to this ethic violators” said an reporter who do not want to describe his name.
That give and take for campaign took place during parliamentary sessions closed.
ဘီဘီစီ မြန်မာပိုင်းမှ သတင်းထောက်တစ်ဦး အောက်လွှတ်တော်ဥက္ကဌ အတွက် ပြည်သူများအား စည်းရုံးပေးရန် အမေရိကန်ဒေါ်လာ တစ်သောင်း လက်ခံရရှိအတည်မပြုနိုင်သေးသော သတင်း များ အရ ဘီဘီစီ မြန်မာပိုင်းမှ သတင်းထောက်တစ်ဦး သည် အောက်လွှတ်တော်ဥက္ကဌ အတွက် ပြည်သူများအား စည်းရုံးပေးရန် အမေရိကန်ဒေါ်လာ တစ်သောင်း လက်ခံရရှိခဲ့ကြောင်း သတင်းရရှိသည်။
“ဘီဘီစီ မြန်မာပိုင်းက သတင်းထောက်တစ်ယောက်ဟာ ဘီဘီစီ အွန်လိုင်းနဲ့ ရေဒီယိုကို သုံးပြီး ရွေးကောက်ပွဲ မတိုင်ခင်မှာ ဦးရွှေမန်းအတွက် စည်းရုံးမှုတွေ လုပ်ပေးဖို့ ကျပ်သိန်းတစ်ရာ လက်ခံရယူခဲ့တယ် လို့ သိရတယ်။ သတင်းကတော့ အတည်မပြုနိုင်သေးဘူးပေါ့။ ပြီးခဲ့တဲ့အပတ် ကပဲ ကျွန်တော်တို့ သတင်းထောက်တွေကြားမှာ ဒီသတင်း ဖြစ်နေခဲ့တာလို့ ပြောလို့ ရပါတယ်။ ဒီပိုက်ဆံက ကျွန်တော်တို့အတွက် ဆိုရင် များတယ် လို့ ပြောရမှာပေါ့။ လွှတ်တော်ဥက္ကဌ သားဆီ က ပိုက်ဆံရတယ်၊ သူအနေနဲ့ ဘီဘီစီသတင်းဌာနကို ကန်ပိန်း လက်နက်အဖြစ် သုံးပေးမယ် ဆိုပြီး သဘောတူရတယ် လို့ ပြောတယ်။ ဒီသတင်း မှန်လား၊ မမှန်ဘူးလားတော့ မသိရသေးဘူး။ ဒါပေမယ့် မှန် မမှန်ဆိုတာကတော့ ဘီဘီစီက ထုတ်လွှင့်မယ့် သတင်းတွေကို ကြည့်ရင် သိလာရ မှာပဲလေ။ မှန်တယ်ဆိုရင်တော့ သတင်းထောက်တွေ အနေနဲ့ ဒီလိုမျိုး ကျင့်ဝတ်ချိုးဖောက်တဲ့ သူတွေကို လိုအပ်သလို အရေးယူဖို့ လိုမယ် ထင်ပါတယ်” ဟု အမည် ထုတ်ဖော်ပြောကြား လိုခြင်း မရှိသည့် သတင်းထောက်တစ်ဦးက ပြောသည်။
မဲဆွယ်စည်းရုံးမှု ပြုလုပ်ပေးရေးအတွက် ငွေကြေးအပေးအယူ သဘောတူညီချက် များကို လွှတ်တော် ရပ်နားထားချိန်တွင် လုပ်ဆောင်ခဲ့ခြင်း ဖြစ်ကြောင်း သတင်းရရှိသည်
စာရေးသူ Oppositeye myanmar at 8:16 AM